Manson Family Member Lynette 'Squeaky' Kubva
Matambudziko Mhosva dzeChinemhosva
Lynette Alice 'Squeaky' Kubva
Nhoroondo yeManson Family Member
Lynette 'Squeaky' Kubva
Lynette 'Squeaky' Kubva pane yakazova izwi revatungamiri vechitendero, Charlie Manson paakaendeswa kujeri. Mushure mokunge Manson akatongerwa kurarama mujeri, Fromme akapfuurira kupa upenyu hwake kwaari. Kuti aratidze kuzvipira kwake kuna Charlie, iye aive nepfuti paMutungamiri Ford , iyo iye zvino ari kushanda mutongo weupenyu.
Muna 2009, akasunungurwa pahurukuro. Kusiyana nedzimwe dzakawanda dzekare dzemhuri dzemhuri dzaManson , zvinonzi yakaramba akavimbika kuna Charlie.
Fromme's Childhood Years
Lynette Alice "Squeaky" Dhimei akaberekerwa muSanta Monica, California musi waOctober 22, 1948, kuna Helen naWilliam Fromme. Amai vake vakanga vachigadzira imba uye baba vake vaishanda semuchina weaeronautical.
Lynette aiva mukuru kudarika vana vatatu uye akanga ari mumwe wevatambi venyeredzi muuto revana rainzi Westchester Lariats. Hondo yacho yakanga ine nyanzvi zvokuti yakapoteredza nyika uye yakaratidzwa paRutherrence Welk kuratidzwa uye kuWhite House.
Dambudziko Rinosiya Musha
Munguva yekuchikoro kwekuchikoro kweLyn yaipfuura, akanga ari nhengo yeAtenean Bless Society uye neAmai Athletic Club. Upenyu hwake hwemusha, zvisinei, hwakasuruvara. Baba vake vanodzvinyirira vaigara vachimurova nekuda kwezvinhu zviduku.
Muchikoro chesekondari, Lyn akava mupanduki ndokutanga kunwa nekushandisa zvinodhaka. Mushure mekunge apedza kudzidza, akabva kumba ndokuenda uye akabuda nevanhu vakasiyana. Baba vake vakaisa chimiro kumararamiro ake echigypsy uye vakatsigira kuti adzokere kumba.
Akadzokera shure ndokuenda kune El Camino Junior College.
Chimiro Chinoenderana naCharlie Manson
Pashure pekukakavadzana kunotyisa nababa vake pamusoro peshoko rezwi, Lyn akaisa zvikwama zvake ndokubva pamba kumba kwekupedzisira.
Akaguma paVenice Beach apo akasangana naCharlie Manson . Vaviri vacho vakataura kwenguva refu uye Lyn akawana Charlie achikurira sezvaaitaura nezvezvaanotenda uye manzwiro ake pamusoro pehupenyu.
Kubatana kwepfungwa pakati pezviviri kwaiva kwakasimba uye apo Manson akakokwa Lyn kuti aende naye pamwe naMaria Brunner kuti vafambe munyika, Lyn akakurumidza kubvumirana.
Kuchema uye George Spahn
Sezvo mhuri yeManson yakakura, Lyn aiita seine nzvimbo yakakwirira muhurumende yeManson.
Apo mhuri yakatamira kumudzimai we Spahn, Charlie akapa Lyn basa rekutarisira ane makore makumi mana, George Spahn uyo akanga ari bofu uyewo muchengeti weimba. Zita raLyn rakaguma rakachinjwa kuva "Squeaky" nekuda kwekunzwika kwaaizoita apo George Spahn aizomhanya zvigunwe.
Zvakanga zvichitaurwa kuti Squeaky akatarisira zvose zve Spahn zvaidiwa kusanganisira izvo zvepabonde.
Squeaky Inova Musoro WeMhuri
Muna Gumiguru 1969, mhuri yeManson yakasungwa nekuda kwebhavha uye Squeaky yakanga yakapoteredzwa pamwe neboka rose rechikwata. Panguva ino, dzimwe nhengo dzeboka dzaive dzakabatanidzwa mukuuraya kwakashata pamusha we actrice Sharon Tate uye kuurayiwa kwevanhu vaviri veLaBianca . Squeaky akanga asina kubatanidzwa zvakananga mumhondi uye akabudiswa kubva mutirongo.
Ndiine Manson mujeri, Squeaky akava mukuru wemhuri. Akaramba akazvitsaurira kuna Manson, achitsvaira pfupa rake neine "X" isina kunaka.
Squeaky Inosungwa Nemazuva Akawanda
Zviremera hazvina kufarira Squeaky kana imwe yemhuri yeManson nekuda kweiyo nyaya.
Squeaky nevamwe vaakarayira vakaiswa musungwa kakawanda, kazhinji nekuda kwezviito zvavo munguva yeTate-LaBianca muedzo.
Dare rakasungwa pamhosva dzaisanganisira kushorwa kwematare edzimhosva, kukanganisa, kukanganisa, kuedza kuuraya, uye kukwikwidza hamburger kune imwe nhengo yemhuri Barbara Hoyt ane kudarika kweLSD.
The Ever Devout Squeaky
Muna March muna 1971, Manson nevatsigiri vake vakapomerwa mhosva yekufa, gare gare vakachinjwa kuva mutongo weupenyu.
Squeaky akatamira kuSan Francisco apo Manson akaendeswa kuSan Quentin , asi vakuru vakuru vejeri havana kumubvumira kuti amushanyire. Apo Manson akatamirwa kuenda kuFolsom Prison, Squeaky akazotevera uye akagara mune imwe imba muStockton, CA naNancy Pitman, vaviri vekare, uye James naLauren Willett.
Mutori weBurliosi aidavira kuti Willetts ndivo vaitungamirira rufu rwemhosva yemhosva, Ronald Hughes.
International People's Court of Retribution
Musi waNovember 1972, James naLauren Willett vakawanikwa vakafa uye Squeaky nevamwe vana vakasungwa nekuda kwekuuraya. Mushure mokunge vana vakapupura mhosva yacho, Squeaky akasunungurwa uye akatamira ku Sacramento.
Iye neshamwari yemhuri Sandra Good vakatamira pamwe chete ndokutanga International International Court of Retribution, sangano rinonyengera raishandiswa kutyisa vatungamiri vekambani kuti vafunge kuti vakanga vari mumarudzi makuru emagandanga akakunda mutsara nokuti vakasvibisa mamiriro ezvinhu.
Manson akaunganidza vasikana sevasitendi nokuda kwechitendero chake chitsva chinonzi Order of Rainbow. Sevasisita, Squeaky uye Zvakanaka vairambidzwa kuita zvepabonde, tarisa mafirimu echisimba, kana kusvuta uye vaifanira kuve vakapfeka mahembe refu ehooded. Manson akazotumidza zita rokuti Squeaky "Red" uye basa rake raiva rokuponesa Redwoods. Zvakanaka zvakanzi zvakare "Blue" nekuda kwemaziso ake ebhuruu.
"Dzvuku" yakazvipira kuita kuti Manson azvirumbidze nebasa rake rekusika, uye paakaona kuti Mutungamiri Gerald Ford akanga achisvika kuguta, akasunga a .45 Colt kamwe chete kusvika mujeri homberi ndokuenda kuPort Park.
Sezvo Ford yakauya kuburikidza neboka revanhu, Squeaky "Red" Lynette Fromme akatarisa pfuti pa Ford uye akabva atorwa pasi neS Secret Service. Akapomerwa mhosva yekuedza kuuraya Mutungamiri wenyika , kunyange zvazvo akazobudiswa pachena kuti pfuti yaaitakura yakanga isina mabhomba muimba yekuputira.
Kutongerwa Upenyu mujeri
Sezvo yaiva iyo nzira yaManson, Tome akasimiririra pamhosva yake asi akaramba kuratidza uchapupu hwakanga hwakakosha munyaya yacho uye panzvimbo payo akashandisa senzvimbo yekutaura pamusoro pezvakatipoteredza.
Mutongi Thomas McBride pakupedzisira akamubvisa kubva mudare. Pakupera kwekutongwa, Tome akakanda aple ku US Attorney Dwayne Keyes musoro nokuti akanga asina kutora uchapupu hwekunyora. Lynette Fromme akawanikwa aine mhosva uye akatongerwa kurarama mujeri.
Akasara Kupfuura Muenzaniso Jeri
Mazuva ejeri yejeri haana kumbove asina chiitiko. Pajeri muPleasanton California, zvakashamiswa kuti akaunza kuvhara kwekupedzisira kwechimwe nyundo pamusoro weJulienne Busic, muCroatia Nationalist uyo akaiswa mujeri nokuda kwekubatanidzwa kwake muna 1976.
Muna December 1987, akapukunyuka kubva mujeri kuitira kuti aone Manson waainzwa achifa nekenza. Akakurumidza kubatwa ndokudzokera kujeri. Akashanda kusvika muna 2009 apo akasunungurwa pahurukuro.
Onawo: Manson Family Photo Album
Desert Shadows naBob Murphy
Batsira Skelter naVincent Bugliosi naChart Gentry
Kutongwa kwaCharles Manson naBradley Steffens
Kuipa KweStanley Tookie Williams
Nhoroondo yaJodi Arias uye Muurayi weTravis Alexander
Mukadzi Akabatwa muna 1980 Kuurawa kwaKatherine Foster
Vachikuvadza Bhuku - Mhosva dzekubata vana
Nhoroondo yaFiripi Markoff Uyewo anozivikanwa seCarigslist Killer
JonBenet Ramsey Murder Investigation
Iko 'Nyasha yeBhana' Nyaya
Chikara Chirikadzi Vanouraya - Vakadzi Avo Vakauraya Mari
Vadzidzisi vechikadzi Vanosungwa Kuti Vave Nepabonde Nevadzidzi
Bonnie uye Clyde Photo Gallery
Kutongwa kwaMaria Winkler
10 Dombo Denyeredzi Akadzima Pakati Payo
The Verse / Chorus Song Form
The Best Flanders Zvikamu zve 'The Simpsons'
Ndezvipi SAG Awards uye Ndivanaani Votes veVakunda?
Magwaro pamusoro Pokuregererwa kwaJesu Kristu
The History of Polyurethane - Otto Bayer
Nyika Ichapupu Mudra
Jack Kilby, Baba ve Microchip
Parietal Lobes of the Brain
Tsvaga Bismuth Metal kubva kuPepto-Bismol Antacid Tablets
Kufungidzira kweGeological: Nzira yeMaitiro Akasiyana Kushanda
Sikh Baby Names Kutanga NaK
Kushamisika! Wakave Uchitora Mhirizhonga Mitsara Yese Iyi Nguva
Bhuku reBhuku reKubvunzurudza Mibvunzo yeSista's Keeper yangu naJodi Picoult
Dutu rechiFrench Chinyorwa Chinozivisa Iwe Nous Vous Ils Elles
Zvinodhaka uye Elvis Presley's Death at 42
Ndeipi Zvivi Ndinofanira Kuzvipupurira?
Ko Palpatine Akakanda Kurwisa Windu mu Star Wars Chikamu III?
Vitamine Inogona Kukuvadza Utano Hwako
Dzidza Nezve Marudzi Akasiyana Masero: Prokaryotic uye Eukaryotic
Chii Chinonzi Calcutta muGorofu?
Kukosha Kwekuregererwa Kwekuregererwa Muzvimwe Zvezvinhu
"13 Nzira dzekukwira Chikoro chako Hurukuro"
Zvinyorwa zveVaduku Vakapfuura paLPGA Tour
Grupo Niche - Best Songs
VaAstist Vanopesana Sei?